U-Egala Agalarov: i-mistress kunye nabafazi bakhe - uLeyla Aliyeva kunye no-Alena Gavrilova, isithombe se-Instagram, iindaba zakamuva
U-Egala Agalarov ungumculi odumileyo, umculi-shishini, umququzeleli wemikhosi yomculo. Ngoncedo lwe talente yakhe, ukunyamezela nokusebenza kanzima, wakwazi ukunqoba iindawo eziphakamileyo kungekuphela kworhwebo, kodwa kwakhona ukuphumelela ukuqatshelwa kwezinto ezingabonakaliyo kwaye zitshintshwe ishishini. Ayikho into ebomini kunye nobomi bakhe obuqukeleleke ngokufanelekileyo, kodwa wayesebenzisa yonke into, ukuba ahambe nolwandle lwahluleka ukuphumeza ulwandle lwempumelelo.
I-Biography ye-Emin Agalarov
Emin Aras Ogly Agalarov wazalelwa eAzerbaijan, kwisixeko saseBaku. Abazali bakhe babesazi isikolo. Emva kwesikolo, uyise wangena kwi-Polytechnic Institute, kunye nonina - kwi-pedagogical. Emva kokugqiba, isi sibini sagqiba ukutshata. NgoDisemba 1979, babe nezibulo-Emin, ngoko intsapho yazaliswa yintombi uSheila.
Iifoto ezidibeneyo kunye ne-Muslim Magomayev
Ngowe-1983, intsapho yaseAgalarov yagqiba ukufudukela eMoscow. Abahlali kwiindawo ezinqabileyo ze-capital-Chertanovo. Ngexesha elithile, uyise ka-Emin waphawula ukuba le nkwenkwe yayifumene nenkampani embi. Ukuze asindise unyana wakhe kumntu ongafanelekanga, uAras uAgalarov wanquma ukumthumela kwisikolo saseBswitzerland. Iziko zezemfundo zolu cwangciso ziyaziwa ngemithetho yazo eqinile, ziqala ukufundiswa ukuzimela, zinika ulwazi oluhle kwaye zifundisa umgangatho onamandla.
Uneminyaka engama-15 ubudala, le nkwenkwana yayiseemeko ezikufutshane nomkhosi. Kodwa, nangona kunzima kwemeko, u-Emin wakwazi ukuqhuba imidlalo yamakhadi kunye nabafundi afunda nabo ngemilinganiselo yemali yangempela. Izakhono zoshishino sele ziqale ukuvela kumntu oshishino olutsha. Imali efunyenwe kwi "casino engekho mthethweni" kwindlu yokukhwela i-elite iya kwiindleko zesikhwama somfundi.
U-Emin ebusheni bakhe, kunye nonina nodadewabo
Emva kweminyaka eyi-15 u-Emin uyaqhuba izifundo zakhe eMelika. Ubhalisa kwikolishi yaseMelika yaseMelika "Marymount Manhattan College", efumaneka kwiindawo ezicebileyo zaseNew York - iManhattan .Le nsizwa yagqiba ukuqonda konke ubulumko bezolawulo lwezoqoqosho zanamhlanje kwaye yakhetha ukhethekileyo kumphathi wezemali .Yadibanisa nokufunda kunye nokuzama ukuqala ishishini lakhe kwaye ukhusele umvuzo ozinzileyo. Kule nto iphelile, wavula indawo yakhe, apho impahla eyona nto yayiyizodoli zokuzikhumbuza izilwanyana kunye nokubukela kwikhompyutha.
Amanyathelo okuqala ka-Emin Agalarov kwi shishini elikhulu
Umgudu wezoshishino wazibonakalisa kumlingiswa ka-Emin ukususela kwiminyaka yakhe emncinci. Ukususela kwiminyaka eyi-13 wayehlala ezama ukuzinzela imali. Umntu omkhulu wezoshishino mva wathola imali yakhe yokuqala, esebenza njengomcebisi kwizicathulo nakwiivenkile ze-electronics, ukuthengisa iimkhumbuzo kwivenkile yakhe ye-intanethi. U-Emin ubonisa ukuba izakhono kunye nezakhono ezifunyenwe ngaloo minyaka zaba ngamava abalulekileyo, okwakuncedo ekuphuhliseni ishishini lakhe elibi. Kwaye ke ngoko wafunda ukubaluleka kwemali.
Emva kokugqitywa kwiikholeji yaseMerika, umfana othile wayenomdla kwishishini likatata. Ukuqala ngo-2012, i-Emin - isiqinisekiso kunye nomntu onamava oshishino, uba yinxalenye yolawulo lweenkampani ezinkulu ze-Crocus Group. Eyilwe nguyise u-Emin ngo-1989. "Iqela leCrocus" lakha kwaye lihlawula i-trade kunye nomboniso wezindlu. Kuze kube namhlanje, u-Emin Agalarov uyintloko ye-vice-president kule nkampani enkulu yaseRashiya.
UBawo nendodana yaseAgalarovs - iinkokheli zenkampani enkulu ebambeleleyo
Ubunono kunye neetalente zomculo u-Emin Agalarov
Kwi-Emin, kubonakala ngathi kukho izinto ezimbini ezingahambelaniyo ezidibeneyo. Omnye ngumntu oshishino, omnye ungumphefumlo womculo womculo. Ziyabambisana ngokuphawulekayo kwimpawu zakhe kwaye zibonakaliswa ngokuklama kwamagama kunye nempawu zezoshishino zorhwebo loshishino. Uthando lomculo lufakwe ngumakhulu ka-Emin. Wenza ubudlelwane obuchukumisayo kunye neentesane, apho inkwenkwana yakhuliswe khona. Ukukhula, naye wabonisa umdlalo olungileyo womculo - wayethanda iingoma kunye no-Elvis Presley.
Ngesihlandlo sokuqala umculi wokuqala wazama ukwenza ingoma kwimbonakalo eyaziwayo "Vula uMic Night" eMelika, xa wayeneminyaka eyi-18 kuphela ubudala, kwaye wayevakalelwa kukuba ukungena kwesiteji kungakanani kwaye i-adrenaline iphonswa ngaphantsi kwegazi xa umculi we-novice edibana nabaphulaphuli.
I-albhamu yokuqala ethi 'Still' yakhululwa ngo-2006. Wayelandelwa ezinye iqoqo zeengoma. Ngoku amagama abo ayaziwa kubo bonke abalandeli bomsebenzi wobugcisa - "Incredible", "Obsession", "Ukuzinikela", "Wonder". Umculi waqala ukubonakala ngokuphindaphindiweyo kwizigaba eziphakamileyo zehlabathi. Wakhetha i-alias yomsebenzi wakhe ngokugcwele kunye negama-uEmin.
Ukuguqulwa komculo weengoma zomculi u-Emin ngowesi-2012. Emva koko wamtyunjwa kwi-award international "I-Grammy Awards" kwinqanaba elithi "Ukuvulwa koNyaka." Ngaloo nyaka, umculi wenziwa kwi-Eurovision Song Contest njenge-guest.
Ukusebenza komculi u-Emin kwi "Eurovision" ngo-2012
Olunye uphumelelo lwaloo nto yayikukhutshwa kwe-albhamu "Emva kweNdudumo", emva koko abaququzeleli bezotyelelo uJennifer Lopez bamema u-Emin ukuba enze kwikhonsathi yakhe eBaku.
Ngaphezu koko, sele sele idumile kumazwe amaninzi, umculi wagqiba ekubeni akhulume ama-albhamu amabini aseRashiya. Iingqokelela zeengoma ezibizwa ngokuthi "Kwi-Edge" kunye ne "Nachistotu" zaphuma ngo-2013 no-2014. Olu gqibela lwabandakanya iingoma ezininzi ze-duet. Ngokubambisana no-Amin, abadlali abaziwayo besigaba selizwe, njengo-Ani Lorak noGrigory Leps, bacula. U-Emin no-Ani Lorak - "Andikwazi ukusho", "Ndibize". Enye yemisebenzi yokusebenzisana yakutshanje ingoma ye-Emin kunye ne-A-Studio "Ukuba usondele", le vidiyo yakhululwa ngo-2017. Kwizinto zokudala zomculo, ukuqonda ibhizinisi le-Emin kwakuncedo. Ngo-2016 no-2017 waba ngumququzeleli womthendeleko othi "Ukushisa", owawubanjwe kwisixeko saseBaku. Inokwenzeka ukuba, esi siganeko siza kuba yeholide yonyaka yomculo waseRashiya.
U-Emin ulungiselela umthendeleko othi "Ukushisa"
Ubomi bomntu: umfazi nabantwana ba-Emin Agalarov. Umtshato noLeila Aliyeva kunye ne-novel no-Alena Gavrilova
Umfazi wokuqala we-Emin nguLeyla Aliyeva, intombi kaMongameli waseAzerbaijan. Waqala ukukhankanya ubuhle bokuqala base-Azerbaijani ngokuphathelele zonke iinqwelo ezifunekayo. Ekuqaleni wacela imvume kumntwana wentombazana eyamvumela ukuba ayinyamekele intombi yakhe. Ngexesha elithile kamva, ngo-2006, isibini esithile sagqiba ukulungisa ubuhlobo babo.
Ngomnyaka ka-2008, intsapho yabo yayineewele ezimbini zamadodana-uMichail no-Ali. Kwakubonakala ngathi ulonwabo lwentsapho lunokuhlala ngonaphakade, isibini esihle nesidumileyo sandivuyisa.
Kodwa intsapho yaqhekeka kwaye kwimizuzwana ethile abafazi bavuma ukuhlala ngokwahlukileyo. U-Emin waya eMoscow, kwaye uLeila wathatha abantwana bakhe kunye naye waya eLondon. Intsapho yahlanganisana kuphela ngeveki. Ayaziwa ukuba zininzi kangakanani le minyaka ebomini obungayihlukana ngayo. Kodwa isibini sagqiba isigqibo sokubeka onke amanqaku angentla "i". NgoMeyi 2015, bavakalisa ngokusemthethweni ukwahlukana kwabo. Ngelo xesha, uEmin kunye nomfazi wakhe owayengumfazi uLeila bagxininisa ukuba bahlala behlobo. Ngoku u-Emin unothando kwaye unomdla ngokunyamekela oonyana bakhe kunye nentombi yakhe eyamkelwa nguLeila.
U lonwabo lwa-Emin aluzange luhlale ixesha elide. NgoDisemba ngo-2016, wayephawulwe kuluntu olumzekelo we-Alena Gavrilova. Mayelana naye asazi kakhulu - ophumeleleyo kwintsebenzo "Miss Morovia-2004". Kwakungeyona imfihlelo leyo intombazana sele isatshatile kwaye inendodana kumtshato wayo wokuqala.
Emin Agalarov noAlena Gavrilova
Aba bathiwa ngabafazi kunye neengxaki ze-Emin - iindaba zakamuva ezivela kubomi bomculi. Ngaba wayenxenye noAlena Gavrilova?
I-Emin - Iifoto ezintsha kwi-Instagram
U-Emin ungumculi omhle kunye nomsindo, umrhwebi kunye nomntu owaziwayo. Ngokuqinisekileyo, malunga nomntu wakhe kukho ukucinga kunye nokuhleka. Wayekwaziswa ngeenveli kunye nabasetyhini abaninzi. Njalo ixesha umculi wenqatshelwe zonke ezo mphulo.
Uhlala ebelana ngezithombe zakhe kwi-Instagram, ebonisa indlela ovuyisayo ngayo kunye wakhe okhethiweyo uAlena Gavrilova. Waba ngumongo wakhe. Umculi uthi uArain nguye owayefuna bonke ubomi bakhe. Iintetho zeendaba zentlalo zithemba ukuba ngumcimbi womtshato. Ngoko ke, iindlebe zokuthi le mibini yahlukana, ayinaso isiseko. Ngokuchaseneyo, yonke into ibonisa ubunzulu bobudlelwane obutsha bokuthandana no-Emin. Sinikela ngokukhethekileyo kwezithombe ngo-Emin Agalarov ukusuka kwi-Instagram.
Namhlanje, u-Emin Agalarov uhlala endlwini yamaphupha akhe, awayewutshilo ngokwakhe kwinkqubo ethi "Naprosilis"
Indlela yokwenza imvelo yendalo?
Ngaba kufanelekile ukugcina ubuhlungu, kodwa nolwalamano oluqhelekileyo?
I-Tarhun: iipropati ezixhamlayo kunye nezicelo
Xa uMkhuseli weNgcwelekazi ngo-2016?
Ubungakanani obuvela kuJoyce Vedral
Ukulinganisa ubudlelwane: zingaphi izithandana zichitha ixesha kunye kunye njani?
Matshi 8 ngeLamoda!
Indlela yokuhlobisa igumbi lomnyaka omtsha ngezandla zakho?
Iibhola zeCoot Coot
Funda ukugcina amazinyo akho aselula